Kuhlwa emini kwiPirates ezishayela ngonyawo lonwabu emjahweni wesicoco seligi - Impempe
Kuhlwa emini kwiPirates ezishayela ngonyawo lonwabu emjahweni wesicoco seligi
February 3, 2021 February 3, 2021 Impempe.com
Umqeqeshi we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer obukeka engasazi kumele enzeni ukuze bashaye amagoli
Ukuhamba ngomgqigqo wonwabu kwe-Orlando Pirates kwenza kube nzima ukuyibona ifaka inselelo eqinile yokudla isicoco seDStv Premiership.
Ngokushaywa kwayo yiLamontville Golden Arrows ngoLwesibili, iPirates isale imile endaweni yesihlanu namaphuzu angu-25 ngemuva kwemidlalo engu-16. Isilele ngayisishiyagalombili kwiMamelodi Sundowns kanti yona seyiphambili ngomdlalo owodwa.
Kodwa umqeqeshi wePirates kubukeka engakuboni lokhu, noma kungaba wukuthi unomoya ophansi sidalo okanye ubathethisa sebebodwa esithe abadlali bakhe uJosef Zinnbauer.
Phela kubafanele ukuvuswa ebuthongweni ngamazwi aqinile abadlali baleli qembu kwazise babukeka behudula izinyawo muva nje, bengadlali ngendlela elindeleke kubo.
Bekunethemba elikhulu kubantu beBucs ukuthi ukushaya iKaizer Chiefs kuzolinika umfutho ebeliwudinga iqembu kodwa indlela elibhacaze ngayo lihlulwa yi-Arrows iyaliqeda lelo themba.
“Ngiphoxekile,” kusho uZinnbauer ngezwi elinosizi ngemuva komdlalo. “Sesiphinde sathola omunye umphumela omubi. Indlela esidlale ngayo ngesiwombe sokuqala akuyona engakuwinela imidlalo.
“Sizamile ngesesibili. Inkinga enkulu ukuthi asiwashayi amagoli, njengoba ubonile nangephenathi esihlulile namanye nje amathuba. Kumele sizikhandle kusukela ngomzuzwana wokuqala womdlalo kuze kube owokugcina.
“Amaqembu esidlala nawo azikhandla ngokuphindiwe. Ngicabanga ukuthi bekubafanele (abe-Arrows) ukuwina lo mdlalo. Kumele sikhuthale njengoba senzile ngesiwombe sesibili kusukela umdlalo uqala,” kuchaza uJZ.
Ube eseluma ephephetha kubadlali bakhe ngokuzikhandla ngesikhathi bebhekene neChiefs kodwa base bededela umzimba kuBafana Bes’thende, abazidlulele kalula ngo 2-0.
“Asiwashayi amagoli. Kanti ngeke uze uwine uma ungawashayi amagoli. Namagoli asingenelile abelula kakhulu, bekungafanele. Baphonse ibhola ngokushesha basithola sihuqa ubuthongo bashaya igoli.
“(Kwelesibili) Ngicabanga ukuthi kube nokungaxhumani kahle phakathi kuka-Innocent Maela nonozinti (uRichard Ofori) wabe eselingqofa (uMaela) ecabanga ukuthi unozinti ukhona emuva kwakhe, balithola basiminya ngalo.
“Abadlali bakwenzile okusemandleni kodwa akwanele,” kucacisa lo mqeqeshi ovele unengcindezi kwazise sekukhona ingxenye yabalandeli beBucs abakhalayo ngaye, bathi usephelelwe ngamaqhinga makashenxe manje.
Previous Previous post: Akenelisekile ngonompempe athi babadonsa ngejazi njalo uma kumele bawine uMaduka weCeltic
Next Next post: UNcikazi uncome ukuzimisela kukaMmodi bedla iBucs